Tartanka Ciyaaraha Koobka Qaramada Afrika oo maanta ka furmaya K/Afrika – idalenews.com
Tartanka Ciyaaraha Koobka Qaramada Afrika oo maanta ka furmaya K/Afrika
Tartanka Ciyaaraha Koobka Qaramada Afrika ayaa maanta lagu wadaa inuu si rasmi ah uga furmo dalka Koofur Afrika, iyadoo uu socdo diyaar garowgii u dambeeyay ee xaflada furitaanka ciyaaraha oo bilaaban doonta duhurnimada maanta.
Xulka marti gelinaya koobkan Koofur Afrika ayaa lagu daah furi doona ciyaarta hore, waxaana ay la kulmi doonka Xulka yar ee Cape Verde oo wacdaro ka soo dhigtay tartankii Is reeb reebka oo ay soo reebeen Xulka libaaxyada Afrika ee Cameron.
Diyaar garowga ayaa ah mid si aad ah u socda, waxaana lagu amaanay dalka Koofur Afrika sida uu u agaasimay tartankan, waxaana ay ka dambeysay markii sanadkii 2010 uu marti geliyay Koobkii Aduunka.
16-ka Xul ee ka qeyb galaya tartanka ayaa 10-ka mid ah ay horay ugu guuleysteen, waxaana waxyaabaha lagu xusuusan doono ka mid ah ka qeyb gelida xulka K/cagta Itoobiya ee ku yaala geeska Afrika uu markii u horeysay 31-sano tartanka ka qeyb qaadanayo.
Hadaba Group-yada loogu kala qeybiyay xulalka ayaa waxay yihiin ilaa afar Group oo midkiiba laga rabo inay ka soo baxaan labo xul, waxaana tartanka maanta taariikhda tahay ee 19-ka janaayo uu socon doonaa ilaa 10-ka febraayo.
Group A:- South Afrika, Cape Verde, Angola iyo Morocco
Group B:- Ghana, DR Congo, Mali iyo Niger
Group C:- Zambia, Ethiopia, Nigeria, iyo Burkina Faso
Group D:- Ivory Coast, Togo, Tunisia, iyo Algeria
Xulka Zambia oo sanadkii hore ku guuleystay tartanka Koobka qaramada Afrika ayaa isku dayaya inuu difaacdo, hase ahaatee xulalka qaar ayaa ah kuwo aan la dhayalsan karin, inkastoo sanadkan la tabayo Xulalka Masaarida, Senegal iyo Cameroon oo ka mid ahaa xulalka ugu qatarsanaa Afrika ee Tartamadan wacdaraha ka dhigi jiray.
Dagaal xalay ka dhacay degmada Afmadow
Howlgalo ballaaran oo Ciidamada Nabadsugida saaka ka wadaan Dharkeenley